‘छक्का पञ्जा २’— टाउको दुखाई किन ? « Npnews
December 17, 2017 Sun
‘छक्का पञ्जा २’— टाउको दुखाई किन ?
प्रकाशित मिति: October 11, 2017
– दीपेन्द्र खनिया
हरेक सिनेमा, यो काल्पनिक कथामा आधारित छ भनेर शुरु हुन्छ ।
त्यो भन्दा अघि सिनेमा सम्बन्धी नियमनकारी निकाय सञ्चार मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रिय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)ले चलचित्र हेर्छ । कानुनले बन्देज गरेको कुरा भए त्यसलाई काट्छ । समाजमा द्धेष, भ्रम वा विकृती फैलाउने कुरा भए त्यसलाई रोक्छ । हैन भने सिनेमाको कथा र दृश्य अनुसार ग्रेड छुट्याएर प्रमाणपत्र दिन्छ र भन्छ, ‘यो सिनेमा यो–यो समूहलाई देखाउनु ।’
त्यो भन्दा अघि चलचित्र बिकास बोर्डमा यस्तो सिनेमा बन्दैछ । यसका निर्देशक र निमार्ता यी–यी हुन् । कथा यिनको हो । कथाको मुख्य सार यो छ । कलाकार यी–यी हुन् भन्ने पूर्ण जानकारी विकास बोर्डमा नियम अनुसार गराईन्छ । यो नगरिकन सिनेमा खिच्न पाईदैन । देखाउने कुरा त परै जाओस् ।
एउटा कथाकारले आफूले सुझे बुझेको आधारमा कथा लेख्छ । त्यो उसको कृति हो । त्यहाँ उसले सपना देख्छ । कथाकार आफै कल्पनामा उड्छ । सृजनाका शब्दले कथालाई सकेसम्म फिल्मी बनाउँछ । त्यसपछि कथालाई कसरी अगाडि बढाउने ? कसरी खिच्ने ? कस्तो कलर दिने ? को–को कलाकार राख्ने ? कथालाई कस्तो पटकथाबाट अघि बढाउने ? त्यो सबै निर्देशक वा उसको टिमको खुबी हो । यो यस्तै हुनु पर्छ भन्ने कहि कतै उल्लेख हुँदैन । सिनेमाको समय क्यानभास हो । यहाँ कस्तो चित्र बनाउने निर्देशक र उसको टिमले निणर्य गर्ने कुरा हो । यो नेपालमा बन्ने सबै सिनेमामा लागु हुने एउटै सुत्र हो । नेपालमा बनेको पहिलो नेपाली सिनेमा ‘आमा’ होस् या अहिले चर्चाको शिखर र दर्शकको मनमा बसेको सिनेमा ‘छक्का पञ्जा २’ यसरी नै तयार भएका हुन् ।
अब कुरा चाहि ‘छक्का पञ्जा २’कै गरौँ । झण्डै १ करोड ५० लाख रुपैँया खर्च गरेर दीपक–दीपाको टिमले अहिले प्रदर्शनमा आएको सिनेमा ‘छक्का पञ्जा २’तयार पारेको हो । यो सिनेमा बनाउन झण्डै २ सय जनाको टिमले लगातार ७५ दिन काम गरेको छ । आलोचनाका लागि त जे भन्दिए पनि हुन्छ । तर ध्यान दिनु पर्ने कुरा चाहि के हो भने, कथाको कल्पना देखि असोज ११ गते सम्म आईपुग्दा एउटा जम्बो टिमले १ बर्ष मेहेनत गरेको छ । जीवनभर जानेको, सिकेको, बुझेको अनुभव जम्मा गरेर दीपक–दीपा र उनको टिमले ‘छक्का पञ्जा २’ व्यावसायिक सिनेमा बनाएको हो ।
यो समय र पैसाको लगानी कसैलाई होच्याउन, गाली गर्न र दुःख दिन न त दीपक दीपाले गरेका हुन् न अरु कसैले गर्न सक्छ । डाह र ईष्र्या भएका वा कसैबाट परिचालितहरुले मात्रै फरक सोच्न सक्लान ।
नाफामा आँखा धेरैका छन् । सिनेमाले जतिनै पैसा कमाए पनि सबै सर्लक्कै दीपक–दीपाले घर लाँदैनन् । सिनेमा बन्न महिनौँ लाग्छ । लाखौँ खर्च हुन्छ । सिनेमा बनिसकेपछि सिनेमा चलाउने हल हुन्छ । वितरक हुन्छ । पैसाको कारोबार गरे पछि सरकारले कर लिन्छ । सबैलाई तिरे पछिको रकम मात्रै निमार्ताको हुन्छ । ‘छक्का पञ्जा २’ मा त झन् दीपक र दीपा मात्रै निर्माता छैनन् । झण्डै दर्जन निर्माताहरु छन् ।
उनीहरुको पनि बुद्धि र विवेक यसमा जोडीएको छ । आलोचना गर्नु, सामाजिक संजालमा ख्याति कमाईएला कि भनेर फरक सोच राख्नु एउटा कुरा होला तर हतोत्साहि बनाउनु, मुल कामको चर्चा नगरी खोट मात्र लगाउन खोज्नुमा समग्र सिनेमा उद्योगकै विकास र उन्नती देख्न नसक्नेले उठाएको बहस त हैन ? भन्ने कुराको तरंग स्वभाविक रुपमा उठ्दै छ ।
‘छक्का पञ्जा २’ दीपक दीपा र उनको टिमले मनोरन्जन सहित पैसा कमाउनका लागि नै निर्माण गरेको व्यावसायिक सिनेमा हो । यो नयाँ सडकको खुलेको सुन पसल र बानेश्वरको चिया पसल जस्तै हो । नाफाका लागि खोलिएका स्कुल र ‘छक्का पञ्जा २’ मा केही पनि फरक छैन । अस्पताल खुल्छन् । सिनेमा हल बन्छन् । अनलाईन र रेडियो सञ्चालनमा आउँछन् भनेजस्तै दीपक र दीपाले जानेकै सिनेमा बनाउन हो । उनीहरु सिनेमा बनाईरहन्छन् । यो व्यवसायिक सिनेमा हो । काम सँगै दामका लागि पनि उनीहरुले सिनेमा बनाएका हुन् ।
सिनेमा बनाएर कंगाल हुने रहर कसैलाई हुँदैन । उनीहरुले त पैसा पनि कमाएका छन् दर्शकको मन पनि जितेका छन् । ईष्र्या र डाहा भएकाहरुले मात्रै उनीहरुको विरोध गरिरहेका छन् । हैन भने जसले नियमन गर्नुपर्ने हो उसको अनुमति सहित कानुन र संविधानको पालना गर्दै प्रदर्शनमा आएको ‘छक्का पञ्जा २’ बाट आत्तिनेहरु को त ? उत्तर कसले खोजीदिने ? विकास बोर्डले, चलचित्र संघले, निर्देशक समाजले, निर्माता संघले वा फेरि पनि सामाजिक संजाालहरुले ? दीपक– दीपा र उनको टिमलाई कसले जवाफ दिने ?
दीपक र दीपाको अर्को कुनै व्यापार छैन । सिनेमा र सिनेमाकै वरिपरि उनीहरुले झण्डै ३० बर्ष बिताउन लागे । उनीहरुलाई के सहि हो र के गलत हो भन्ने राम्ररी थाहा छ । उनीहरुको अनुभवलाई अक्षरमा उतार्ने हो भने युनिभर्सिटीको एउटा सेमेस्टरको कोर्स बन्छ । दुधले नुहाएको कोहि पनि हुँदैन । दीपक र दीपाले पनि ‘छक्का पञ्जा २’ प्रदर्शनमा आएपछि भएका केहि कमजोरीलाई सच्याएर ‘छक्का पञ्जा ३’ बनाउने घोषणा गरिसकेका छन् । तर जसरी ‘छक्का पन्जा २’ लाई जोडेर जतिले टाउको दुखाई रहनु भएको छ, कृपया अरुको उन्नतीमा आफ्नो प्रेसर नबढाउनुहोस् । रोगले तपाईलाई नै थिच्छ ।
बरु त्यो समय दीपकपक र दीपाले जस्तै लाखौंको मन जित्ने असल कर्ममा लगाउनुहोस् । सिनेमा उद्योगका लागि दीपक–दीपाले गरेका राम्रा काम धेरै छन् । राम्रो कामको तारिफ गर्ने बानी बसाल्नुस् । उनै कवि दुर्गालालको गीत जस्त,ै फूलको आँखामा फुलै संसार …………
नक्कली लुटपाटका योजनाकार इलामबाट पक्राउ
मंगलबारे, इलाम, २ पुस । इलाममा बेवारिसे हतियार फेला परेको केही दिन बित्न नपाउँदै सोही घटनामा संलग्न छ जनालाई प्रहरीले
के प्रेम बानिया नेपाल फर्किदै छन ? जाउँ देश बनाउँ भन्दै गरे नेपाल फर्किने संकेत
प्रेम बानियाँ लाई नचिन्ने नेपालीहरु सायदै कम छन् । कुनैबेला रवि लामिछानेभन्दा प्रेम बानियाँलाई बेशी मानिसहरु चिन्दथे । उनै बानियाँ
ओलीले भनेः भारतले जवाफ दिइसक्यो, कथाका पछाडि किन कुद्ने? (हेर्नुस पूरा भिडियो)
काठमाडौं, २ पुस। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली शर्मा ओलीले वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि पूँजी पलायन हुन्छ, लगानी आउँदैन भनेर दुश्प्रचार
खोला किनारमा प्लास्टिकको झोलामा पोको पारेर फालिएको अवस्थामा शिशुको शव फेला
नुवाकोट, २ पुस – विदुर नगरपालिका–८ बगुवा खोला किनारमा प्लास्टिकको झोलामा नवजात शिशु (बालक) को शव भेट्टिएको छ । आज
आफ्नो आलोचन गर्ने हरुलाई रबी लामिछानेको चोटिलो जबाफ साथै खुसीको खबर (भिडियो सहित )
सिधा कुरा जनतासंग नामक कार्याक्रमबाट चर्चा बटुलिरहेका रबि लामिछानेले बिषेशत सामाजिक कुराहरुलाई चोटिलो रुपमा उठान गर्दै आएका छन् । नेपालीले
मंगलबारे, इलाम, २ पुस : इलाममा बेवारिसे हतियार फेला परेको केही दिन बित्न नपाउँदै सोही घटनामा संलग्न छ जनालाई प्रहरीले
पौष महिनाको राशिफल यस्तो छ
यो कस्तो प्रेम सम्बन्ध हो ? बुढो शिक्षक र किशोरी क्षात्राको अनौठो प्रेम ! यसरी भाइरल भयो (फोटो सहित)
यी हुन् चर्चामा आउन नचाहने प्रचण्डका ‘जेठा छोरा’ सागर !पढ्नुहोस पुरा ...!
पाठेघरको मुखमा क्यान्सर छ कि छैन बेलैमा कसरी थाहा पाउने ?
फेसबुकका मालिक मार्क जुकर्बर्कको सुझाव : फेसबुक प्रोफाइलबाट यी ११ कुराहरु हटाइहाल्नुस, नत्र पछुताउनु पर्ला
महिला गुप्तांग बारेका १० रोचक तथ्यहरु-जुन तपाईलाई आज सम्म थाहै छैन
हेलिकप्टर दुर्घटना – राष्ट्रपतिकी बहिनीसहित ६ को मृत्यु
गुप्ताङ्गका रौं काट्दा कस्तो असर पर्छ ? आयो डरलाग्दो रिपोर्ट
बाटोमा हिडिरहेकि युवतीलाई चर्चित गायक प्रमोद खरेलको कारले दियो ठक्कर ,अबस्था यस्तो
१५ वर्षीय किशोरलाई भाउजुसँग जबर्जस्ती बिहे, किशोरद्वारा बिहेकै रात आत्महत्या
माघ देखि नागरिता काम नलाग्ने ! पुरा पढ्नुहोस
श्रीमतीले गिफ्ट दिएको मोवाइलले पुर्यायो जेल, यसरी खुल्यो गम्भीर अपराधको रहस्य
अब नेपाल मै पनि कैदीबन्दीले कारागारभित्रै आफ्नो पार्टनरसँग शारीरिक संसर्ग गर्न पाउने
यी पोजिसनहरुमा सम्भोग गर्दा लामो समय सम्म गर्न सकिन्छ र स्वर्गीय आनन्द आउछ !
संचालक तथा सम्पादक : जिवन राई, सुचना बिभाग दर्ता नं : १९५/०७३/७४, ठेगाना: ठेचो, ललितपुर, फोन : ९८६००३०३०३, इमेल : [email protected],
2017 | npnews.net.